Lalao miaraka amin'ny tsy ampoizina Xbox Gold miaraka amin'ny Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Vaovao momba ny gadget
Ny lalao maimaim-poana dia tonga hatrany amin'ny sehatra, eny, maimaim-poana raha mihevitra isika fa mandoa famandrihana hahazoana fidirana amin'ny serivisy amin'ny Internet. Izany no fomba anomezan'izy ireo ampihimamba bebe kokoa ireo mpampiasa ao amin'ny ekosistia izay toa miharihary fa saika voatery mandoa izany, izany no antony Sony sy Microsoft Izy ireo dia mitazona ny ady hahitana izay marika manome ny lalao tsara indrindra isam-bolana.
Amin'ity tranga ity dia niloka be tamin'ny Metal Gear Solid i Microsoft: The Phantom Pain, na dia tokony ho fantatrao aza fa lalao video izay efa nomen'i Sony volana vitsivitsy lasa izay. Aorian'ny fitsambikinana dia hojerentsika hoe iza ireo Lalao volamena tamin'ny volana Mey 2018, ho fanampin'ny MGSV
Ity no fitsangatsanganana Snake farany izay notarihin'i Hideo Kojima karismatika, tafiditra amin'ny tetikasa hafa ary lavitra an'i Konami, taorian'ny nandaniany ny tetibola iray manontolo tamin'ny lalao video tao amin'ny fampisehoana iray fotsiny io. Teo anelanelan'ny 16 Mey sy 15 Jona dia ho afaka tsoahina ny Metal Gear Solid V: The Phantom Pain an'ny Xbox One sy Xbox 360 raha mbola nahazo ny famandrihana isam-bolana an'ny Xbox Live Gold mazava ho azy. Saingy tsy tongatonga ho irery izy io, manana atiny bebe kokoa isika.
Baseball Super Mega 2 (Xbox One): Hita mandritra ny volana Mey
Sega Vintage Collection: Streets of Rage (Xbox One sy Xbox 360): 1-15 Mey
Vanquis (Xbox One sy Xbox 360): 16-31 Mey
Tsy lalao mirehareha loatra izy ireo fa ampy mba hialana voly. Mandritra izany fotoana izany ao amin'ny PlaySation Plus dia manomboka tsaho fa afaka mahita lalao toa azy isika Dark Souls II, The Order 1886 na filàna haingam-pandeha, fa ho an'izay dia mbola misy ny ampy, ka hanohy hiandry izahay hahita izay asehon'i Sony hijoro amin'ity mpilalao Microsoft ity amin'ny volana Mey 2018, eo akaiky eo ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Lalao miaraka amin'ny Xbox Gold tsy ampoizina miaraka amin'ny Metal Gear Solid V: ny Phantom Pain